Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhow gaaray magaalada Baydhabo, halkaasoo saacadaha soo socda uu ka furmi doono shirka Madasha wada-tashiga qaran.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu ka furo shirka madasha wada-tashiga, kaasoo noqon doona kii ugu dambeeyay ee ay yeeshaan Madaxda Soomaalida.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Madaxweynaha Koofur Galbeed iyo Mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale waxaa iyana goor dhow gaaray Baydhabo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana la filayaa in Madaxda Maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ay iyana tagaan.
Ciidamada dowladda, kuwa Koofur Galbeed iyo Ciidamada AMISOM ee Itoobiya ka socda ayaa ka qeyb qaadanaya sugida ammaanka magaalada, iyadoo ciidamada ay baro ciidan ka sameysteen gudaha iyo daafaha magaalada.
Saraakiisha Amniga Baydhabo ayaa ku soo rogay awaamiir la xiriirta dhinaca amniga inta uu socdo shirka Madasha, waxaana magaalada laga mamnuucay mootada loo yaqaano bajaajta.
Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa lagu wadaa in lagu dhameystiro go’aanadii horay loo gaaray, isla markaana Madaxda isla dejiyaan qorshayaashii fulinta doorashooyinka dadban ee dalka ka dhici doona sida in lagu dhawaaqo waqtiga la qabanayo doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka, labadiisa kuxigeen iyo doorashada Madaxweynaha.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 22-06-2016
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom oo howlgalo ka sameeyay Deegaano Hiiraan ka tirsan